Waaheen Media Group » Golaha Guurtida oo Xukumada ugu Baaqay in Awoodii Baanka Dhexe dib loogu celiyo, Soona Saaray Qodobo Dhaxal gal ah oo ay kaga hadleen Siyaasada Dibad iyo Gudaha
Browse:Home Videos Golaha Guurtida oo Xukumada ugu Baaqay in Awoodii Baanka Dhexe dib loogu celiyo, Soona Saaray Qodobo Dhaxal gal ah oo ay kaga hadleen Siyaasada Dibad iyo Gudaha	Golaha Guurtida oo Xukumada ugu Baaqay in Awoodii Baanka Dhexe dib loogu celiyo, Soona Saaray Qodobo Dhaxal gal ah oo ay kaga hadleen Siyaasada Dibad iyo Gudaha
Comments Off on Golaha Guurtida oo Xukumada ugu Baaqay in Awoodii Baanka Dhexe dib loogu celiyo, Soona Saaray Qodobo Dhaxal gal ah oo ay kaga hadleen Siyaasada Dibad iyo Gudaha	In Xukuumadu qorshayso goddoloolooyinka maamulka ee Goboladda Bari inta ka horaysa Doorashooyinka.
In xidhiidh sokeeye lala yeesho wadamada jaarka ah lana kordhiyo xidhiidhka aynu la leenahay midawga yurub iyo carabta
Hargeysa(Waaheen) Golaha Guurtida ee Somaliland ayaa Kal-fadhigani 62aad kaga hadlay Talooyin ay u soo jeediyeen hay’adaha kala duwan ee dawlada Sida Komishanka doorashooyinka, Baanka dhexe, Wasaaradaha Arrimaha Dibada, Arrimaha gudaha, Deeganka iyo hay’ado kala duwan.
Fadhigasi oo soo xidhmay shalay isla markaan xildhibaanada Golaha gurtidu galeen Fasaxii bisha Ramaadan, ayaa uu Hog-hayaha Guud ee golaha Guurtida Garyaqaan Cabdinaasir Aadan Beegsi uu ka akhriyey qodobadii ay tallo soo jeediinta golaha guurtidu soo saareen. “Mudanayaal doodii hadal-qoraalka ajandaha oo dib loogu celiyey Guddiyadda Golaha Guurtidda, guddiyaduna tallo-soo-jeedin ay ku soo tallo bixiyeen Golaha horkeeneen.
Mudanayaal, waxaa Shir-guddoonku guddi ahaa noogu magacaabay in Tallooyinkaasi Guddiyadu aanu dib u eegno aanu tallo midaysan oo dhaxal gal ahna ka soo saaro, taasi oo ka tarjumaysa doodihii Golaha Guurtidda ee Ajandaha kal-fadhigani.
Mudanayaal, Kal-fadhigani waxa uu ku soo beegmay oo uu kaga duwan yahay kal-fadhiyadii hore :- b) waxa uu ku soo beegmay waqti ay dalka ka jiraan Abaar baahsan oo baad & biyo la`aan ah & xanuunka shubanbiyoodka oo meelo dalka ka mid ah lagu arkay. t) waxa uu ku soo beegmay waqti ay Doorashooyinkii dib-u-dheceen muddadii Xukuumadana in dib loogu kordhiyaa ay loo baahday Goluhuna uu Mudadaasi xilliga ugu haboon ee uu u arkay kordhiyey. j) waxaa kale oo kal-fadhigani ku beegmay sixir barar baahsan oo la soo darsay lacagta shilinka Soomaaliland, kaasi oo bulshada oo markii hore abaartu jilcisay culays ku sii kordhiyey dhanka maceeshada dadka. Tallo Bixinta Golaha: Siyaasada:- Goluhu isaga oo ka duulaya duruufaha siyaasadeed & xaaladaha taagan, falanqayn & doodo uu ka yeeshay ka dib, wuxu Goluhu tallo ku soo jeedinayaa qoddobadan:- b- Siyaasada Gudaha:- In Xukuumadu qorshayso goddoloolooyinka maamulka ee Goboladda Bari inta ka horaysa Doorashooyinka. In la xoojiyo Nabadgelyada, wixii carqalad gelin kara wax laga qabto, sida dhulboobka, caddaalad darada & musuqmaasuqa IWM oo keeni kara in siyaasada guduhu khalkhal gasho. Siyaasada Debeda: In xidhiidh sokeeye lala yeesho wadamada jaarka ah lana kordhiyo xidhiidhka aynu la leenahay midawga yurub, carabta & wadamada aynu jaarka nahay. In wuufuud ballaadhan loo diro dibeda gaar ahaana meelaha ay wax inooga suurta galayaan. In la mideeyo lana hawl gelyo jahliyadaha debeda ee Reer Soomaaliland. Nadabgelyada:- Goluhu isagoo u dedaalaya Nabadgelyada & horumarinteeda & sidii wax looga qaban lahaa wax kasta oo nabadgelyada wax u dhimaya wuxu tallo ahaan ku soo jeediyey: In Goluhu doorkiisa ka qaato turxaan bixinta & soo afjarida isku-dhacyada beelaha gaar ahaan tan iminka taagan ee koonfurta G/sool dibna loo eego Guddidii Guurtidda ee Arrintaasi hore uu Goluhu ugu xil saaray, In la sameeyo wacyi gelin guud oo loogu kala boxo Gobolada & Degmooyinka dalka. In dilalka sababi kara isku dhaca bulshada oo la waafajiyo Shareecada Islaamka “Qofkii qof dilana loo dilo oo aan lagu hayn xabsiyada“
.Si loo xakameeyo dadka ajaanibka ah ee Dalka sida Sharci darada ah ugu sii badanaya, kuna cidhiidhyey bulshada reer Soomaaliland ee abaaruhu aafeeyeen fursadaha shaqo, lagu soo rogo cida khilaafta sharciga isu socodka caalamiga ah ganaax lacageed si loogu kabo dhaqaalaha dalka , odoroska miisaaniyadana lagu daro ganaaxa dadkaasi laga qaadi doono. X- Arrimaha Bulshadda:- Goluhu isagoo la socda Arrimaha Bulshada Reer Soomaaliland wuxuu kaga tallo bixiyey: In Golayaasha la hor keeno Xeerka Siyaasada Waxbarashada dalka lana tayeeyo manhajka Waxbarashada. In la mideeyo Direyska dugsiyada Dalka Dawlad & mid gaar loo leeyahayba, si kor loogu qaado bilicda waxbarashada.In la sammeeyo Dugsiyadii Farsamada gacanta oo tayaysan, si loo hello arday xirfad gacmeed leh.In qorshe laga yeesho biyo roobaadka lana sammeeyo dhaamam lagu hakiyo biyaha bada galaya si looga faa`iidaysto.In seerayaashii dawlada la soo celiyo si loogu baxsado xilligan abaaruhu soo noqnoqanayaan. Kh- Garsoorka:In Garsoorka & caddaalada tababaradooda & Daryeelkoodaba xooga la saaro.In Xabsiyada Dalka la kordhyio gaar ahaan Caasimadda in loo dhiso Xabsi dumarka & Caruurta u gaar ah.In Shuruucada Waaxda Garsoorku ka cabanayaan Golayaashu si deg-deg ah wax uga qabtaan. D- Dhaqaalaha:-Golaha Guurtigu isagoo Dhaqaalaha Bulshada & Dalkaba xog ogaal u ah Wuxuu tallo ahaan ku soo jeedinayaa: In Awooda Baanka Dhexe kor loo qaado maadaama uu isaga u xil-saaran yahay lacagta Dalka.In lacagta Jaadka lagu soo celiyo sidii hore loogu isticmaali jiray, lagana dhigo lacagta Ethiopia, si doolarka dalka ka baxaaya loo xakameeyo; !!!.In dadweynuhu aaminaan lacagta Shillinka ah ee Soomaaliland. r- Xukuumadda, Guddida Doorashooyinka & Asxaabta: In Guddida Doorashooyinku isu diyaariso sidii ay u qaybin lahayd Kaadhadhka Diiwaangelinta Codbixiyayaasha iyagoo adeegsanaya Dawladaha hoose & Badhasaabada Dalka. In Xisbiyada dalku mudada kaadh qaadashada ay iska illaaliyaan wax-kasta oo keeni kara astaamo Olole Xisbi.
Gebo-gebadii:- In Golaha Guurtidu isu diyaariyo Olole wacyi gelineed oo ku waajahan Nabadgelyada & sidii doorashooyinku dalka uga qabsoomi lahaayeen mudo kordhin danbena aanay u timaadeen.
Allaa Mahad Leh, Guddiga Goluhu u saaray:- Yuusuf C/llaahi Cawaale, Axmed Muuse Obsiiye, Maxamuud Xareed Rooble. Axmed Daahir Maxamuud, Jirde Siciid Maxamed, C/naasir Aadan Beegsi